स्वागतम् स्वागतम् पाहुनालाई: एक पागलको डायरी
Subject: एक पागलको डायरी
मध्य चैतको घाम, बाफिलो सडक, हुरी र बतास । पुतलीसडकचोकमा बाटो क्रस गर्ने ध्याउन्नमा जेब्राक्रसिङ्नेर उभिएर म ग्रीनलाइट अधीरतासाथ पर्खन लागेँ ...। टाढाबाट बाढीले बगाउँदै ल्याएका वस्तुहरू कतै पर पुर्‍याएर किनारमा थुपारेजस्तै मेरापछि म उभिएको किनारमा एक निमेषको समयले बाटो पार गर्ने हूल मान्छे थुपारसिकेको थियो । म एकोहोरो ग्रीनलाइटको प्रतीक्षा गर्दै रहेँ ...। जब ग्रीनलाइट बल्यो, होडमा बाटो पार गरूँभन्दा त मसँगै उभिएको मान्छेको बाढी उर्लेर उहिल्यै रातो बत्ती छिचोल्दै सडकपार िपुगेर पनि आ-आफ्नो गन्तव्यतिर छिन्नभिन्न भइसकेछन् । दायाँबायाँ हेर्छु त साथमा नजिकै एक पागल मात्र उभिएको देखेँ । म र पागल दुवैले सँगसँगै बाटो क्रस गर्‍यौँ । नचिने पनि उसले मलाई नमस्कार गर्‍यो, मैले पनि स्वाभाविक नमस्कार फर्काएँ र आ-आफ्नो बाटो लाग्यौँ । त्यो पागलभित्रको धैर्य र शिष्टताले म प्रश्निल आश्चर्यमा अलमलिरहेँ । सोचेँ, ऊ त पागल नै थियो रे ! असामान्य थियो रे ! तर, म आफूलाई सद्दे कसरी ठानूँ ! जबकि, नियम पालन गर्ने म भर्खर मात्र राम्रैसित पागल सावित भइसकेकी थिएँ । आखिर त्यो समाज नामको हूल सबैले मलाई पागलको साथ छाडेर एक्ल्याएका थिए । मलाई साथ दिने त्यो पागल अहिले पनि काठमाडौँको व्यस्त फुटपाथका हूलहरूमा यसै हिँडिरहेको भेटिन्छ त कहिले जहाँसुकैको चौबाटो सडकको बीचमा उभिएर ट्राफिकले झैँ समयसूचक, दिशासूचक र नियमसूचक हात हल्लाइरहेको हुन्छ
... इमानलाई अधिक प्रेम गर्ने ऊ पनि सायद मजस्तै जीवनको नियम इमानदारपूर्वक पालना गर्दागर्दै एक्लो बृहस्पति झूटो भएसरह बेइमानहरूको भीडबाट छुटेको -अलग्गिएको) इमानी पागल हुनुपर्छ ।... हुनसक्छ, तोड्नकै लागि बनाइएका हुन्छन् नियम र संविधानहरू । त्यसमा पनि भ्रमद्वारा भ्रमकै लागि भ्रमित नियम र संविधान उफ् नियम नतोडिँदा पो पागल ...।
विश्वास नै हुँदैन कि म भने गन्तव्य कँुदिएको खुला सडकमा निर्बिघ्न यात्रारत छु ... । यद्यपि, उही पागलसँग, त्यो पनि नितान्त मेरो निजी सपनामा, जो केवल मात्र मेरो अर्थात् एक पागलको हो ।आँखामा पर्दा हालेर पनि यात्रामा सदा म नयाँ नेपालको दर्शन गररिहेछु । अञ्जानमै छुटेका क्रूर शासकका सालिकबाहेक त्यहाँ कुनै कविका सालिकहरू छैनन्, पुरातात्त्विक दरबारहरू छैनन् । सङ्ग्रहालयमा परचियहीन मानवकङ्कालहरू सङ्गृहीत छन् । कतै देखेदेखेजस्तो, चिनेचिनेजस्तो तर साइनबोर्ड बदलेर आफ्नै इतिहासको चिहानमा उभिएका बडेमाका ल्यान्डमार्कहरू त्यहाँ छन् र जम्मामा म बाँचेको युगमा रङ्गहीन रङ्ग पोतिएको छ । अब समकालीन आमाहरूका साथमा आफ्ना सन्तानहरूलाई आफू बाँचेको युगको परचिय दिने सन्दर्भित कुनै मौलिक कलाकृतिहरू रहेनन्, उज्यालो-अँध्यारो कुनै पृष्ठभूमिहरू छैनन्, जहाँ रत्तिो भाँडा बजेसर िनयाँ र आधुनिकताको निगाहमा बजिरहेछन् रििमक्स धुनहरू... !
खै कहाँबाट सुरु हुन्छ म उभिएको धर्तीको आकाश ! र, खै कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ ! आकाशको त कुनै दोष छैन तर ऊ बिनाकारण धर्तीका नीलडामहरू स्वयम्मा खापेर बाँच्न अभिशप्त छ ! साँझ पनि उदास छ किनभने कोही आउँदो प्रभातको जड नै उखेलिरहेजस्तो छ, यहाँ ! जीवन जप्दैजप्दै भङ्ग भएको तत्पश्चात्को निस्सार पहेलीजस्तो, सर्वस्व ठानेको डायरी हराएपछिको एकतमासको खाली र अधुरो जीवनजस्तो आगामी अनिष्टको भयमा सन्नाटामय गुमसुम छ बस्ती ! सुकेको पात झरेको आवाजले पनि झस्कन्छ गाउँसहर !यसरी आफ्नै जिन्दगीसँग कस्तरी दूरी बढेको छ, यहाँ सभ्यताको चिहानघारीमा कहिले फुल्छ, अर्को फूल !यथार्थमा तिम्रो स्वीकृत एकान्त र मेरो इच्छित एकान्त जरुर भिन्न होला । तिमी कोहीकसैबाट एक्लिएर आफैँसँग रहेका छौ, सायद ! तर, म आफूबाट एक्लिएर दुनियाँमा जिउन चाहन्छु, तिमीसँग हाँस्न-रुन चाहन्छु । फेर िपनि सकिरहेकी छैन । र पनि मेरो एकान्तमा एकएक वृक्षको आवाज अनि हरेकलाई स्पर्श गरेर बहने हावाको भिन्नभिन्न सुगन्धलाई महसुस गर्न चाहन्छु । तिनीहरूमध्ये म जुन सुगन्धले बेस्सरी स्पर्शित हुन्छु, सिर्फ उसैको पछि बहन्छु, जबसम्म म उसलाई सम्पूर्ण महसुस गर्दिनँ । यद्यपि, एकाग्रता अर्को पागलपन हुनसक्छ ।
जब म पारजिात सोच्छु, यी कथनहरूमा म उनलाई याद गर्छु- 'जीवन जतिजति बाँच्दै गयो, उतिउति अनुभूतिहरूको विशाल काव्य बन्दै जान्छ !' यथार्थमा यो उनको जीवनप्रतिको कलात्मक अवधारणा थियो । जीवनप्रतिको मेरो अनुरागमय कलासंवेदन सायद त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यहीँबाट डायरीबद्ध हुँदाहुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा मेरो दुस्साहस काव्यमय बनेछ क्यारे ! यसर्थमा नै उनीप्रति म आभारी छु र रहनेछु ।जब म उनलाई पढ्छु, उनको आँखा र हृदय निकै नै खाली भेट्छु । पढ्दा उनका उपन्यासका कतिपय पानाहरू पनि खाली भेट्छु, जतिबेला म उपन्यासमै पागल भएर हराएको हुन्छु । कति सुखद छन् ! पाना खाली रहेका क्षणहरू, जहाँ स्वयम् म खाली पानामा एकाकार भएर डायरीबद्ध भइसकेकी हुन्छु ।आज म यो पागलको डायरी मेरो समयलाई उपहारस्वरूप चढाउन चाहन्छु । पि्रय समय ! कतै तिमीले फुर्सदमा यो डायरी पढेछौ भने जहाँजहाँ खाली पाना भेट्नेछौ, सम्झ त्यो पाना तिमी-म उभिएको धर्तीको नाममा समर्पित छ !
Posted by बिजय कुमार श्रेष्ठ at 3:24 PM
के पायौ त ख्याति